बाथरूम तौलिया क्याबिनेट
घर / ब्लग / जापानी बाथरूममा तौलिया क्याबिनेट १० सेन्टिमिटर पातलो छ, स्टोरेज राम्रोसँग
2021 / 01 / 16 वर्गीकरणब्लग 6596 0
बाथरूम क्षेत्र ठूलो छैन, कसरी भण्डारण गर्ने सजावट गर्दा अधिक उचित छ? क्याबिनेट स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ र एउटा क्षेत्र कब्जा गर्न चिन्ता। तर ती बोतलहरू र जारहरू र तौलिएहरूका लागि, तिनीहरूलाई कहाँ राख्ने?
राम्रो कुरा के हो भने मेरो एक साथी छ जो दुई वर्ष पहिले जापान मा अध्ययन गर्छिन्, उनले मलाई भनिन् कि यस बिन्दुलाई पूर्ण रुपमा जापानी परिवारको बाथरूम डिजाइनमा समेट्न सकिन्छ। १० सेन्टीमिटर अल्ट्रा-पातलो तौलिया क्याबिनेट स्थापना गर्नुहोस्, बहु-कार्यात्मक भण्डारणको माथिल्लो र तल्लो तहहरू, व्यावहारिकता धेरै बलियो छ!
किन जापानी बाथरूमहरू यो डिजाइन मन पराउँछन्?
▼सानो बाथरूमको लागि उपयुक्त क्षेत्र कब्जा नगर्नुहोस्
यस्तो तौलिया क्याबिनेट, केवल पातलो १० सेन्टीमिटरको समग्र गहिराई। चाहे यो भित्तामा सम्मिलित छ, वा खुला भित्ता, बाथरूम स्पेसको सामान्य गतिविधिहरूलाई असर गर्दैन।
▼कडा भण्डारण मल्टिफंक्शनल
यो यति पातलो क्याबिनेट हो, दर्जनौं तौलिए भण्डारण समस्या होइन! माथिल्लो, मध्यम र तल्लो भण्डारण तहहरू। क्याबिनेट ढोकाको बीच बन्द बन्द भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ, शीर्ष विभाजनहरू गर्न प्रयोग गरिन्छ। निम्नलाई सिल्फ क्याबिनेट ढोकाको रूपमा सिधा बाहिर पस्रन सकिन्छ, कपडा परिवर्तन गर्न प्रयोगको लागि। र तल घुमाउने तौलिया बार हो, कुनै बालकनी छैन। भिजेको तौंलीहरू यो तौलिया क्याबिनेटमा सिधा सुक्न सकिन्छ, कति चतुर!
भण्डार गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ, सुख्खा गर्न सकिन्छ, यस्तो व्यावहारिक क्याबिनेट कसलाई मन पर्दैन?
▼सुख्खा र भिजेको पृथक्करण
यो यसको स्तरयुक्त भण्डारण सुविधाको कारणले हो, क्याबिनेट सीधा भूमिमा चढाइएको छैन। तल्लो सुक्खा तौंली स्थिति सीधा overhanging छ, त्यसैले कुनै बाथरूम मृत ठाउँ छैन। भिजेको र सुक्खा बिच्छेदन क्याबिनेट को लागी, तपाइँ नमी र मोल्ड, लामो सेवा जीवन को बारे मा चिन्ता छैन।
साथै तौलिया क्याबिनेटको स्थान पनि सजिलैसँग मिलाउन सकिन्छ: सि s्कको छेउमा राखिएको। धुँदा, यो तपाईं तौलिया लिन र राख्नु उपयुक्त हुन्छ। यो पनि नुहाउन कोठाको भित्तामा राख्न सकिन्छ, कपडा बदल्नको लागि, भिजेकोमा चिन्ता नगर्नुहोस्!
मैले मेरो साथीले भनेको कुरा सुन्ने बित्तिकै, मैले मालिकलाई घर जान र त्यसलाई पुन: स्थापना गर्न भन्नु पर्दैन। ठाउँ बचत गर्नुहोस्, बलियो भण्डारण। यो square वर्ग मीटरको मेरो सानो बाथरूमको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ, सबैले जापानी बाथरूम सजावट भण्डारणको प्रशंसा गरेकोमा अचम्म मान्नु पर्दैन। तर त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् सिक्न, र अन्तमा मेरो साथीले पनि दुई जापानी बाथरूम विवरण डिजाइन साझा, म पनि तदनुसार मेरो घर redecorate निर्णय गरे ↓
विवरण एक: शौचालयको छेउमा एउटा ग्र्याब बार स्थापना गर्नुहोस्
त्यसोभए जब तपाईं लामो समयसम्म चर्पीमा बस्नुहुन्छ उठ्नुहुन्छ, तपाईंसँग मद्दतको लागि ठाउँ हुन सक्छ। विशेष गरी वयस्कहरूका लागि जो वरिपरि घुम्न गाह्रो हुन्छ। जब शौचालयको छेउमा ह्यान्ड्राइल हुन्छ, धेरै सुरक्षित र मानवीय!
विस्तृत दुई: शौचालयको छेउमा सिink्क विस्तार गर्नुहोस्
शेल्फ सतह बढाउनुहोस्, र कोठाको समग्र भाव बढाउन ठाउँ फैलाउनुहोस्, कागज तौलिए, सेल फोन राख्न प्रयोग गरियो। यो बढी उपयुक्त हुन सक्दैन।
विवरण:: सिंकको छेउमा हुकहरूको साथ क्रसबार स्थापना गर्नुहोस्
टूथपेस्ट र अन्य सफाई उत्पादनहरूलाई अलग अलग राखिनेछ। भिजेको र सुक्खा बिच्छेदन, ब्याक्टेरियाको प्रजनन कम, तर पनि वाशबासिन को खाली ठाउँ!
अघिल्लो :: यदि बाथरूम Squ स्क्वायर मिटर भन्दा कम छ भने, भिजेको र सुख्खा विभाजन मलाई हराउन गाह्रो छैन! अर्को: डेल्टा किचन नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा किचन नलका लागि किन्ने मार्गनिर्देशन